🥇 ▷ Sebtember 10 waa taariikhda ugu badan ee la arko iPhone 11 ✅
Sebtember 10 waa taariikhda ugu badan ee la arko iPhone 11
Dhowr saacadood ka hor barnaamijka cusub ee ‘Beta 7’ ee iOS 13, iPadOS iyo aalado kale ayaa la bilaabay Apple, waxayna nooga tagtay si lama filaan ah oo lama filaan ah: taariikhda soo bandhigista ee soo socota ee iPhone 11 ee soo socota. Muuqaal lagu soo daray Beta ayaa u muuqda taarikhda Talaadada Sebtember 10, iyadoo la tixgelinayo waqtiga sanadka aan ku jirno, uma muuqato inay tahay wax isku mid ah.
Bishii Sebtember waxay noqotay bisha aan ku aragno iPhoneka cusub dhawr sano hadda. Durba wararka xanta ah iyo taariikhaha suurta galka ah ayaa muujisay maalintaas inay macquul tahay ee munaasabadda soo bandhigista aaladaha cusub ee la qaban doono, iyo hadda “kormeer” ay sameysay Apple Waxay umuuqataa inay xaqiijinayso.
Sannadihii ugu dambeeyay Apple waxay soo bandhigtay taleefannadeeda casriga ah Arbacada, marka laga reebo 2017 oo ahayd Talaadadii. Guud ahaan waxay sidaa sameysaa usbuuca labaad ee bisha, sidaa darteed taariikhaha ay u badan tahay in la tixgeliyey waxay ahaayeen Talaado 10 ama Arbaco 11ka Sebtember. Sababo muuqda awgood, Arbacada, Sebtember 11, maahan taariikh ku taal gudaha Mareykanka oo loo arko mid ku habboon “dhacdo kasta, sidaa darteed Talaadada 10-ka ayaa ah maalinta loo qoondeeyo inta badan sharadyada, waxaadna moodaa inay guuleysteen.
Goorma ayaa la siidaayaa iPhone-ka aan aragno dhacdada 1-da Sebtember? Apple badiyaa waxay bilaabataa boos celinta jimcaha ee usbuuca soo socda kadib soo bandhigista, taasi waa, sanadkaan Waxaan bilaabi karnaa inaan qabsano iPhone-ka Jimcaha, Sebtember 20. Maalintaas waxay u badan tahay inaan kaydsan karno saddexda nooc ee iPhone, oo aan ahayn sidii sanadkii hore oo ay XR qaadatay bil kale si loo soo bandhigo. Intaa waxaa sii dheer, waxaan arki karnaa dhacdada cusub isla dhacdo la mid ah Apple Watch Series 5 iyo buugga laga bilaabo isla maalintaas 20.